PowerA फ्यूजन प्रो Xbox एक नियन्त्रक छाप
by एरिक प्रश्नहरू
Xbox One को लागि माइक्रोसफ्टको अभिलेख नियन्त्रक कट्टर ग्यामरहरूको लागि एक राम्रो विचार हो जुन तिनीहरूको सटीक हार्डवेयरसँग तिनीहरूको खेल स्तर अप गर्न चाहन्छ। तथापि - दुइटा समस्याहरू छन् - तथापि। तिनीहरू $ 150 हुन्, र 2. तिनीहरू सबै ठाउँमा बिक्रिन्छन्। सौभाग्य देखि, तेस्रो-पक्ष परिधीय निर्माता पावरए एक समाधान छ, $ 80 Xbox One फ्युजन प्रो नियन्त्रक। यो कुलीनको रूपमा सबै समान सुविधाहरू छैन, तर यो अनुकूलन योग्य रोशनीहरूसँग आउँछ (गम्भीर रूपमा, म यस सुविधाको बारेमा पम्प गरिएको छु) र यो राम्रो गणना गर्दा राम्रो हुन्छ। यहाँ सबै विवरणहरू हेर्नुहोस्।
PowerA Xbox One फ्युजन प्रो नियन्त्रकसँग माइक्रोसफ्टको कुलीन नियन्त्रकको लागि धेरै सुविधाहरू छन्। यो दुवै ट्रिगरहरूमा तालाहरू छन् त्यसैले तपाईंले ती ट्याबहरू दर्ता गर्न निकै टाढा राख्नु पर्दैन, जसले तपाईंलाई चाँडै गोली हान्न अनुमति दिन्छ। यी भौतिक तालाहरू तपाईं भर्खरै पछि पछाडी स्लाइड गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसैले तिनीहरू राम्रो काम गर्छन्।
योसँग नियन्त्रकको पछाडि चार प्रोग्रामयोग्य बटनहरू छन्। तथापि, एल्साइट वा रेजरको Wildcat नियन्त्रकको विपरीत, कि प्रस्ताव प्याडल वा थप ट्रिगर टुक्राहरू तपाईंलाई यी थप बटनहरू सजिलो पार्न मद्दत गर्न मद्दत गर्दछ, फ्युजन प्रोको पछाडिको बटन लगभग नियन्त्रकसँग फ्लश हुन्छन् (यहाँ नियन्त्रणकर्ताको पछि हेर्नुहोस्) । तिनीहरू केहि हद सम्म कडा र सख्त हुन्छन् जुन वास्तवमा तपाईको मध्य / औंला औंलाहरू (विशेषतया औंला औंलाहरू संग थिच्न गाह्रो हुन्छ), मलाई थाहा छैन कि मेरो औंलाहरु धेरै कमजोर थिए ...)। तपाईंले अन्ततः उनीहरूको प्रयोग गर्न पाउनुहुनेछ, र तपाईंले तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नुहुने, तपाईंको औंलाहरू प्रकृयामा प्राप्त हुनेछन्। अतिरिक्त बटन प्रोग्रामिंग धेरै सरल छ - तपाईले रोशनी झिकेसम्म नियन्त्रकको अगाडि "प्रोग्राम" बटन राख्नुहुन्छ, त्यसपछि बटनमा थिच्नु हुन्छ जुन तपाई नक्सामा जानुहुन्छ (यो कुनै बटन र भित्री बटन पनि हुन सक्छ), र त्यसपछि पछाडि कुनै पनि बटन तपाईं यसलाई नक्सा गर्न चाहानुहुन्छ। यो सजिलो छ र छिटो कार्यक्रम र यो काम जस्तै हुनुपर्छ।
तथापि Xbox एक फ्युजन प्रो सँग केहि अन्य विशेषताहरु छैन। तपाईं विभिन्न आकार / आकारहरू टुक्राहरूको लागि जस्तै डी-प्याड वा एनालॉग स्टिकहरू जस्तै जस्तै एलाइट, एक बम्मर छ। यो पनि एक फैंसी लिफ्ट मामला जस्तै एलाइट वा रेजर Wildcat संग छैन। यो वायरलेसको सट्टा तारिवार पनि हो (यसको99 कर्ड छ)। यी सबै चीजहरू किन अन्य $ 150 को सट्टा सस्ता $ 80 हो भने तथापि, यो धेरै अधिक शिकायत गर्न गाह्रो छ।
एउटा सुविधाले यो गर्दछ कि अरूलाई अगाडि बढ्न मनपर्ने रोशनीहरू छैनन्। जब म भन्न चाहन्छु कि यो सुविधा वास्तवमा मलाई अप्ठ्यारो छ र कारणको कारण म यसलाई कवर गर्न चाहन्छु (के हो? तपाईंको नियन्त्रकमा बैजनी रोशनीहरू चाहिन्छ अहिले अपराध छ?)। रोशनीहरू नियन्त्रणकर्ताको पछाडि बटनमा खोल वा बन्द छन् र तपाईं उज्ज्वल र रंग परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ। रोशनीहरू Xbox बेम वरिपरि एक "V" आकारमा छन् र मध्यमा नेभिगेसन बटनहरू र एनालॉग स्टिकहरू वरपर सर्कलहरूमा पनि छन्। तिनीहरू ठुलो देखिन्छन। मलाई उनीहरु मन पर्छ।
केवल एक चीज मलाई रुचि छैन कि एनालॉग स्टिक्स मानक XONE नियन्त्रकहरु को तुलना मा humongous हो। पिक्चरका शीर्षहरू X360 बाट XONE को आधिकारिक नियन्त्रकहरूमा सानो भए, र मैले पाएको छु कि मैले पछिल्लो दुई वर्षमा सानो एक्सोन स्टिकहरू मनपर्छ। फ्युजन प्रो मा लीक को शीर्षहरू 360 लक्जरी भन्दा पनि ठूला हुन्छन्, जसको अर्थ तिनीहरू असाधारण छन्। सायद माइक्रोसफ्टले सामान्य मानव आकारको थम्बनेल वा केहिमा पेटेंट छ। मलाई थाहा छैन किन किन अन्य PowerA ले यस तरिकामा ठूला स्टिकहरू प्रयोग गर्नेछ।
तथापि, यहाँ वास्तविक सवाल भनेको Xbox One फ्युजन प्रो $ 80 को लायक छ। त्यो एक मानक Xbox One नियन्त्रक भन्दा 15-20 डलर भन्दा बढी हो, यद्यपि यो अझै स्पष्ट रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक "कुलीन" नियन्त्रकहरू भन्दा कम छ। के यो यसको लायक छ? यी "कुलीन" नियन्त्रकहरूको बारेमा सुरूवात कुरा यो कुरा हो कि तिनीहरू वास्तवमा हरेकको लागि होइन। वास्तवमा, प्रायजसो ग्यामरहरू थप बटनहरू र घण्टीहरू र सीइस्टहरू चाहिँदैन र शूटरहरू मात्र ठीक खेल्न सक्छन्। यी नियन्त्रकहरू सामान्यतया कट्टर प्रतिस्पर्धात्मक शूटर (तपाइँलाई थाहा छ, स्टार वार्स ब्रेकफ्रन्ट , हेलो 5, ब्ल्याक ओप्स तेस्रो , भाग्य, गियर्सको युद्ध , आदि) को उद्देश्य हो जुन वास्तवमा केहि फायदा केहि केहि सटीक हुन सक्छ र उनीहरूको औंला पनि एक मिलिसेन्डको लागि। सामान्य खेलाडीहरू (जुन हामी विशाल, विशाल बहुसंख्यक छन्) नाटकीय सुधारलाई ध्यान दिदैनन्।
त्यसो भए, तथापि, $ 80 मूल्य ट्यागले Xbox One फ्युजन प्रो बनाउछ जुन एक अप्ठ्यारो आवेग ती व्यक्तिहरूलाई फरक फरक देख्न सक्छ कि हेर्न चाहनेहरूको लागि खरिद गर्दछ। ट्रिगरमा ट्रिगर तालाहरू र थप बटनहरू (यदि तिनीहरू पहिलोमा थिच्न गाह्रो भए तापनि) विज्ञापित रूपमा काम गर्नुहोस् र तपाइँको खेललाई सम्भावित रूपमा मद्दत गर्न सक्दछ। यो मानक एक्सोन नियन्त्रक र अतिरिक्त सुविधाहरू (लाइट, ट्रिगर तालाहरू, अतिरिक्त बटनहरू) को तुलनामा पर्याप्त ठोस छ शायद अतिरिक्त नकदको लायक हो। म यो सबै को लागि मानक नियन्त्रक माथि सिफारिस गर्दैन, तर यदि तपाईं उत्सुक हुनुहुन्छ र केहि अतिरिक्त नगदहरू छन् भने तपाईं PowerA Xbox One फ्युजन प्रो भन्दा धेरै खराब गर्न सक्नुहुनेछ।
ग्रैंड थेफ्ट ओटो आईवी चतुर्थ कोड्स: Xbox 360
अविश्वसनीय हल्क धोखा - Xbox 360
BlazBlue: क्रोनोo फान्टेमा EXTEND समीक्षा
गोताफाई2धोखाधड़ी, कोड्स र गोपनीयता को Xbox 360 को लागि
गिटार हीरो कसरत
शीर्ष दस सर्वश्रेष्ठ OG Xbox खेल 2003
गिटार हीरो: स्मैश हिट पूर्ण ट्र्याक लिस्ट
स्पीडको लागि आवश्यक सबै भन्दा धोखाधडी र कोडहरू - Xbox
शीर्ष 10 Xbox लाइभ आर्केड गेम्स
कसरी प्लेस्टेशन सञ्जाल खाता सिर्जना गर्ने
आउटलुक मेलमा ईमेल एड्रेस द्वारा प्रेषकलाई कसरी ब्लक गर्ने?
सबै Google Now को बारेमा
NTLDR र Ntdetect.com को पुनर्स्थापित कसरि गर्नुहोस Windows XP CD बाट
फ्लोन्स XLBP Bipole वरपर ध्वनि लाउडस्पीकर - समीक्षा
सिग्नल - लिनक्स / युनिक्स कमान
यदि तपाइँसँग विन्डोज 64-बिट वा 32 बिट छ भने कसरी भन्नुहोस्
यी सन्देश सन्देशहरू अनुप्रयोगहरूको प्रयोग गरी निःशुल्क भिडियो चैट
10 लोकप्रिय अनलाइन मोबाइल किनमेल अनुप्रयोगहरू
रोकोले5मोडलसँग मिडिया स्ट्रीमर लाइन विस्तार गर्दछ
तपाईंको म्याकको RAM अपग्रेड गर्नुहोस्: आफैलाई थाहा छ
तपाईंको आईप्याड प्रयोग गरेर Amazon Video मा एप्पल भिडियो कसरी चलाउनुहुन्छ
मेगापिक्सेल के हो?
OS X Yosemite को लागि Safari 8 मा पहुँच सेटिंग्स कसरि संशोधित गर्नुहोस
FuboTV के हो?
मोबाइल गेम अनुप्रयोग विकासको लागि उत्तम उपकरण
के आइपड नैनोमा अनुप्रयोग स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ?
वेब सामग्रीको अर्थ बुझ्न
आईफोन र अनुप्रयोगहरूको लागि वीओआईपी
हिज्जे जाँच कसरी गर्ने? मेल सन्देशहरू
Corel KPT सङ्ग्रह